Ukuphupha iTortilla ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-omelette sisitya esenziwe ngamaqanda. Ezi ziyashukunyiswa okanye zibethwe kwaye zithosiwe nzulu epanini. Abantu abaninzi bayayixabisa i-omelette njengokutya kuba inokulungiswa ngokukhawuleza kwaye ngokulula, kwaye iyathandeka. Ke ngoko, inendawo ephambili ngokubhekisele kukutya uqobo. Kodwa, iyintoni intsingiselo enokuba nayo kwi-omelette xa ibonakala njengophawu lwephupha? Atolikwa njani amaphupha apho ukutya kunikwa okanye kutyiwa kulowo uchaphazelekayo?
1 Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolikwa ngokubanzi
Amaphupha apho utya khona i-omelette okanye ipanekuku, ngokutolikwa ngokubanzi, zihlala zibonisa isilumkiso. Isifundo sedatha sithembela ngokulula kwabanye abantu kwaye siboyikisa. Ukhohlisiwe a yiba. Ngokufanelekileyo umntu osondeleyo uya kuthi kungekudala axoke ephupheni ukuze afumane into kuye ngale ndlela kwaye afezekise iinjongo zakhe. Umntu ekuthethwa ngaye kufuneka alumke angazivumeli ukuba aqhume. Ukongeza, iphupha kufuneka libonwe njengesimemo sokucinga ngakumbi malunga nokuba ngubani omele ukuthembela kwaye ngubani omele anike into njengembuyekezo. Ngaba bantu kuphela abanokuba ngabahlobo bokwenene.
Olu toliko lwesimboli yephupha luyaqiniswa ngakumbi ukuba omnye umntu ephupheni ukhonza i-omelette kulowo kuthethwa ngaye. Omnye umntu uya kwazi ngokuthe ngqo ukuba ngawaphi amagama ekufuneka awakhethe ephupheni ukuze amncome ngokwendlela yokutolika ngokubanzi. Ngale ndlela, umntu uya kubamba ukuthanda kwakho kwaye akuxhaphaze ngenceba.
Uphawu lwephupha lunokutolikwa kuphela ngokuqinisekileyo ukuba umntu ekubhekiswa kuye uzilungiselela ngokwakhe i-omelette. Kule meko, iphupha libonisa enye Ndiyifumana inomdla o umhlobo omtsha phakathi. Umntu ekuthethwa ngaye kufuneka enze ubomi bakhe bemihla ngemihla ngendlela evulekileyo nenobuhlobo ukunika ithuba umntu amaziyo omtsha.
Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolikwa kwengqondo
Ukwenza i-omelette kunokuba luncedo ngokwasemphefumlweni Zoba amandla amatsha kuba. Ukuphupha kuyabazi ubuchule bakho kwaye ufunde ukuwasebenzisela injongo ebomini. Ngale ndlela, ubomi bakho buza kuthabathela kwelinye. Kwangelo xesha, umntu ochaphazelekayo ubeka iinjongo ezintsha kwaye asebenzise ngcono amathuba okuzifikelela.
Uphawu lwephupha «omelette» - ukutolika kokomoya
I-omelette inokuba luphawu lokuchazwa kwamaphupha kweli nqanaba. amathuba okomoya lomntu ochaphazelekayo. Ukutya, azikhethele kona, kuphawula isimilo sakhe kwaye kunefuthe eligqibeleleyo kuphuhliso lwephupha. Kwakhona, ukulungiselela i-omelette, oko kukuthi, ukupheka ephupheni, kunokuba ngumqondiso wokuphakama ubuchule lomntu ochaphazelekayo.